Akụkọ - UUGreenPower na - ewepụta ihe anọ na - enye ọfụma
UUGreenPower weputara Ngwọta Supercharging Anọ
UUGreenPower weputara Ngwọta Supercharging Anọ!
Core n'ọnụ: on August 26, na 14 Shanghai International odori ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ngosi ẹkenịmde ke Shanghai New International Expo Center. Na nke a ngosi, a ọnụ ọgụgụ nke ụlọ na ndị mba ọzọ kpakpando ụlọ ọrụ gụnyere ọgụgụ isi Nchaji ngwọta, na-akwado ụlọ ọrụ ngwọta, elu Nchaji technology, ọgụgụ isi na-adọba ụgbọala usoro, ụgbọala ike ọkọnọ, photovoltaic, ike nchekwa usoro, wdg
Iji dozie nsogbu ike na-arịwanye elu na nsogbu gburugburu ebe obibi, nnukwu mgbanwe agbanweela na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ụwa. Energygbọ ala ndị ọhụrụ abụrụla atụmatụ mmepe kachasị nke mba dị iche iche, a na-akwalitekwa nhazi nke nyocha na teknụzụ na usoro nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Na Disemba 2018, mmepe mba na kompeni komenti, ochichi nke ike obodo, ndi mịnịstrị nke ụlọ ọrụ na teknụzụ ozi na Mịnịstrị na-ahụ maka Ego jikọtara aka wepụta "ọkwa maka atụmatụ emere maka iji meziwanye ikike nkwado ụgwọ nke ụgbọ ala ọhụụ ọhụrụ", nke o doro anya na achọrọ "mee ngwangwa nnyocha na ngwa nke elu-ike odori technology", "forming oru ụkpụrụ maka elu-ike odori nke electric ụgbọ ala, na-arụ nnyocha na mmepe nke elu-ike odori technology maka njem ụgbọala na ọkọlọtọ tupu ịdọ aka ná ntị Research ọrụ ". Na July 2020, State Grid Corporation nke China, yana China Power Grid Corporation, chademo protocol Association nke Japan na Tokyo Electric Power Co., Ltd., wepụtara akwụkwọ ọcha na Chaoji na-ebu teknụzụ nke ụgbọ ala eletrik, nke na-egosiputa ọgbọ ọhụrụ nke na-ebugharị nkà na ụzụ na-agagharị na ọkwa ọhụrụ nke usoro nhazi na ngwa mmepụta ihe, na ikike ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-achọpụta ike dị elu.
N'ụzọ dị ịtụnanya, na ihe ngosi a, Shenzhen UUGreenPower Electric Co., Ltd. (nke a na-akpọ UUGreenPower), onye ndu nke EV nwere ọgụgụ isi na ịwepụta ihe ngwọta, na-ebute ihu ya na teknụzụ ọhụụ, wee bido ụzọ anọ na-akwụ ụgwọ zuru oke. , yana UBC 75010 bidirectional V2G na-ebugharị ikpo, nke nwere ike izute ọtụtụ ngwa ngwa nke V2G n'ọdịnihu, na-ebute ebili njedebe.
Dị ka China odori ikpo network, UUGreenPower ka nọgidere ulo oru a ọnụ ọgụgụ nke odori modul ngwaahịa usoro ya ike R & D otu na afọ nke technology ìgwè na ubi nke ike akakabarede, na ọ nọgidere na-enwe ya na-eduga ọnọdụ na nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ maka a Otee aka. Na ngosipụta ikpeazụ, IP65 nnukwu nchekwa modul, nke ebuputara na ụlọ ọrụ ahụ site na nnwepụta nnwere onwe, agbanyela egbe na ogwe aka na mmepe mmepe nke ntụkwasị obi dị elu na nnweta dị elu maka ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ.
N'ime ihe ngosi nke afọ a, ngwaahịa ọhụrụ dị iche iche nke UUGreenPower kwalitere dọtara ọtụtụ ndị si ụlọ ọrụ ahụ ilele na ụlọ ọrụ mgbasa ozi iji zoo maka mkpuchi. China na-agbazi ikpo netịren gbara ajụjụ ọnụ Bo Jianguo, onye isi njikwa UUGreenPower, onye ji ndidi webata ngwaahịa ọhụrụ maka anyị.
Anọ super nchaji ngwọta
40kW super ike ngwa ngwa Nchaji ngwọta
Dabere na Bai Jianguo, onye isi njikwa UUGreenPower, UUGreenPower na-aga n'ihu na-eduga n'ọkwá ya n'ọhịa nke teknụzụ na-ebu ikike dị elu. Site na teknụzụ ike kachasị ọhụrụ na teknụzụ mgbasa ọkụ, 40kW super power caji modul na-ejigide otu nha na interface na modul 30kW. Na imewe nke ikpo ahihia, a na-echekwa ohere na ego nke ikpo ahihia a. Ike njupụta nke ikpo ahihia dum na-abawanye site na 30%, na ọnụahịa ọnụego kwa watt na-agbada site na 10%.
Onye na-eweta ọrụ mbụ na ụlọ ọrụ iji kwalite otu nha, ike dị elu nke 40kW na-agbanye ọkụ modul, njupụta ike ruo 60W / na3, na-eduga ọkwa ụlọ ọrụ.
Atọ ọkwa Vienna PFC topology, ụlọ ọrụ anọ nwere njikọ dị iche iche, teknụzụ jikọtara magnetik, njikwa dijitalụ na-arụ ọrụ nke ọma, nhazi usoro nhazi kachasị mma.
Adaba na mmepe ụzọ nke elu ike na ngwa ngwa odori na njem
Ike njupụta nke ikpo ahụ dum na-abawanye site na 30%, na ọnụahịa ọnụahịa kwa watt na-ebelata 10%
IP65 elu nchebe ngwa ngwa Nchaji ngwọta
The isi akụrụngwa nke odori ikpo bụ odori modul. Ndabere na nkwụsi ike nke arụmọrụ ya bụ isi ihe na ntụkwasị obi nke usoro nkwụ ụgwọ. Na-eto ngwa ngwa nke ọnụ ọgụgụ nke odori ikpo arụnyere na China, ihe dị iche nke n'ezie ọrụ arụmọrụ nke odori modul na-nwayọọ nwayọọ gosipụtara. Na-adịbeghị anya, odida ọnụego nke odori modul kemgbe a isi nsogbu na-emetụta na e odori ebe usoro.
Dabere na nyocha nke ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ, a na-etinye ikpo ikpo n'èzí na uzuzu uzuzu, ọnọdụ dị elu na mmiri ozuzo. Ọ bụ ezie na ọkwa nchekwa nke ikpo ikpo bụ IP54 n'ozuzu ya, nhazi nke modul na-abụkarị IP20 site na ikuku ifufe. Uzuzu, ikuku nnu, mmiri ozuzo na gburugburu ebe obibi ga-abanye na modul ahụ, wee metụta ndụ ọrụ. Ya mere, ka fundamentally dozie nsogbu a, rụọ ọrụ nchebe gburugburu ebe obibi nke odori modul ga-abụ isi ihe.
N'ime ihe ngosi a, UUGreenPower gosipụtara ụdị emelitere nke 2.0 nke modul nchekwa IP65 ya dị elu. Mgbe ihe karịrị otu afọ siri ike nyochaa gburugburu ebe obibi, a ga-etinye ụdị ọhụụ nke modulu na ahịa n'ọtụtụ buru ibu n'oge na-adịghị anya. IP65 nchebe dị elu na-agbaso teknụzụ nke ikuku na-ekpo ọkụ nke onwe ya, yana usoro a pụrụ ịdabere na ya ka mma. Enwere ike ịchekwa ndụ ndụ TCO niile nke sistemu usoro na-echekwa ihe dịka 40000 RMB ma e jiri ya tụnyere modulu IP20 na afọ 10.
O adabara maka ngwa ngwa siri ike dịka aja uzuzu, ikuku nnu na odide
A na-emezi ntụkwasị obi modul, mmezi n'efu maka afọ 5, a na-echekwa ego mmezi kwa afọ banyere 3000 RMB / afọ
Ejiri ngwongwo niile kwalite na IP65 na-enweghị usoro mmiri na-enweghị mkpuchi nke modul, nke na-azọpụta ego
The odori ikpo adịghị mkpa AC contactor, ájá na-àmà owu, iyuzucha ofufe, na-azọpụta banyere 3000 RMB / kabinet
Na-ewere 120kw otu ikpo dị ka ihe atụ, ego TCO nke afọ 5 na afọ 10 bụ ihe dị ka 10000 RMB na 40000 RMB n'otu n'otu
30kW elu mgbanwe ngwa ngwa Nchaji ngwọta
Bo Jianguo, onye isi njikwa UUGreenPower, webatakwara ngwaahịa kpakpando ọzọ, usoro 30kW na-agba ụgwọ na ọtụtụ nkọwa maka ọnọdụ dị iche iche. Dị ka Maazị Bai si kwuo, modul a nwere ike izute ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ nke ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche ma nyere ndị ahịa aka ịghọta atụmatụ ngwa ahịa kacha mma. Dịka ọmụmaatụ, 750V / 40A maka ọdụ ụgbọ ala, 1000V / 30A maka ebe ị na-ebugharị ụgbọ na 500V / 60A maka ọdụ mgbanwe ike. Na mgbakwunye, maka gburugburu nnu nnu na-efegharị, enwere ngwugwu ndobe nkọwapụta (f) modul na nkọwapụta Europe (b) maka ahịa Europe.
Eduga ahịa òkè nke 30kW elu ike odori modul
Dị iche iche nkọwa dị. 750V / 40a, 1000V / 30A na 500V / 60A dabara adaba maka ndapụta dị iche iche, dịka ọdụ ọdụ ụgbọ ala, ebe ndị na-elekọta mmadụ na-ebugharị ụgbọ na ọdụ ụgbọ mgbanwe ike
Nkọwa nkọwa zuru ezu (f) bụ nhọrọ, dabara maka ngwa gburugburu ebe obibi siri ike
Nkọwapụta ọkọlọtọ European (b) nhọrọ, dabara adaba maka ọdụ ụgbọelu European
Dabere na ọnọdụ dị iche iche, họrọ nkọwa kwesịrị ekwesị iji nweta atụmatụ ngwa ahịa kachasị mma
Mnlebara anya nyocha nke EV na-akwụ ụgwọ azịza
N'otu oge ahụ, iji mezuo nnweta nnweta dakọtara nke otu igwe nwere egbe atọ nke ikpo okwu ọkọlọtọ nke esenidụt nke Europe, UUGreenPower rụpụtara ngwa ọrụ umev04 na-enyocha ikpo okwu nyocha na ngosi a. Otu ngalaba nlekota oru nwere ike dakọtara na ọkọlọtọ European, ọkọlọtọ Japanese na usoro nyocha usoro ọkọlọtọ nke mba. E jiri ya tụnyere atụmatụ nkwụnye ọkụ na-ahụkarị n'ahịa, a ga-echekwa ego nlekota ihe dị ka 50%.
Akpan mere maka ọhụrụ ume odori ikpo, maka maka nkwurịta okwu na electric ụgbọala ike batrị ịghọta dum Nchaji usoro akara
Nkwado dị n'otu nke ọkọlọtọ mba, ọkọlọtọ European na ọkọlọtọ Japanese
Kwado egbe ọhụrụ nke mba abụọ, ọkọlọtọ ọkọlọtọ abụọ nke Europe, ọkọlọtọ ọkọlọtọ abụọ nke Japan, egbe egbe abụọ
Kwado otu igwe nwere egbe atọ (CCS + chademo + AC)
Kwado otu igwe nwere egbe atọ (CCS + CCs + GB / T)
Kwado otu igwe nwere egbe atọ (CCS + chademo + GB / T)
E jiri ya tụnyere bọọdụ nkwụnye ihe dị n'ahịa, a ga-echekwa ụgwọ nlekota ihe dị ka 50%
UBC usoro bidirectional V2G odori ikpo
N'ajụjụ ọnụ ahụ, Maazị Bai kwuru na mmụba ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ ndị na-akwụ ụgwọ na-eweta nsogbu ọzọ nke a na-apụghị ileghara anya. Ka ọ na-erule afọ 2030, ọnụ ọgụgụ nke ụgbọala ọhụrụ na China ga-eru nde 80. N'oge ahụ, ohere na-enweghị nsogbu nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke na-akwụ ụgwọ ga-eduga na mgbanwe mgbanwe dị oke egwu, nke ga-eme ka mmetụta dị ukwuu na ntanetị ike. Ọ bụrụ na emeghị ihe ọ bụla, nsogbu ndị siri ike dịka ike grid overload na ọbụlagodi ike ọkọnọ nwere ike ịda na 2020
Charginggba ụgwọ n'usoro aghọwo ụzọ dị mkpa iji belata ma ọ bụ ọbụna wepụ mmetụta a. Ọ nwere ike ịduzi ma hazie omume nnabata, nyere ike ntanetị aka ịbelata oke ọnụ ma jupụta na ndagwurugwu ahụ, melite arụmọrụ nke ntanetị nkesa na ike ọrụ nke grid ike, wee nweta ọnọdụ mmeri n'etiti ndị ọrụ na okporo. Ihe odide nke nwere ọrụ V2G ga-abụ ngwa ọrụ dị nkọ iji ghọta nnabata na ịchụcha ike grid.
A hụrụ V2G bidirectional na-akwụ ụgwọ UBC 75010 nke ifufe na-acha ọcha na-enwu gbaa na ịnyịnya na-ahụkarị n'ụlọ ntu nke UUGreenPower. Ngwaahịa ahụ nakweere IP65 nchebe dị elu na ikewapụ dị elu ugboro ugboro, yana oke ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile na obere mkpọtụ mkpọtụ. Grid ejikọrọ voltaji nwere ike imeghari ka mba ọkọlọtọ, European ọkọlọtọ na American Standard. The gosiri ike bụ 7KW, nke nwere ike imeghari na echichi gburugburu ebe obibi nke 7KW AC odori ikpo. Enwere ike dochie ya ozugbo ma nwee ezigbo injinia arụ ọrụ.
"Chee echiche banyere ọnọdụ a. Mgbe ị na-adọba ụgbọala eletriki gị n'ọdụ ụgbọala na UBC bidirectional chaji ikpo arụnyere na ụlọ ọrụ ahụ n'ehihie, ma bulie ụgbọ ala ahụ mgbe ị rụchara ọrụ n'abalị, ị ga-akwụ ụgwọ ọtụtụ yuan n'amaghị ama na akaụntụ gị. Ọ bụ mmetụta ọ dị ntụsara ahụ? " Maazị Bai kwuru